Accueil > Gazetin'ny nosy > Cercle Franco-Malagasy : nahoana no potehina ny tantaram-pirenena ?
Cercle Franco-Malagasy : nahoana no potehina ny tantaram-pirenena ?
Araka ny lahatsoratra efa navoakanay teto matetika dia misy ny mikasa hivarotra ny Cercle Franco –Malagasy na ny trano fifankatiavana Frantsay sy Malagasy etsy Anosy. Nanomboka tamin’ny taona 2017 izahay dia efa nilaza mahakasika ity raharaha ity. Nanda izany nefa ny olona mpikambana sasany izay nohadihadianay ary nanambara fa tsy misy mikasa hanao izany fivarotana izany. Ny volana jolay 2018 teo dia nisy indray ny fandrefesana ity toerana ity nataon’ny mpandrefitany hatrany amin’ny kianjan’ny « tennis » izay eo ampitan’ny tranobe, ka voalaza fa misy mivarotra indray. Teo vao gaga ny mpikambana sasany fa misy ny fivarotana ataon’ny olona milaza fa tompon’ity tany sy toerana ity ankehitriny. Ny olona mivarotra azy io nefa dia voalazan’ireo mpikambana izay manohitra izao raharaha izao fa lohandohany amin’ny fitantanana ity toerana ity amin’izao fotoana izao. Voalaza koa fa misy milaza fa manana taratasy amin’izany izy ireo.
Eo anatrehan’izany dia lasa ady saritaka mahatsiravina no mitranga ao amin’ny mpikambana ao amin’ny Fifankatiavana Frantsay sy Malagasy ity amin’izao fotoana izao. Tonga hatrany amin’ny “société civile” ny raharaha. Azo lazaina koa fa tena endrika kolikoly avo lenta tanteraka izy ity satria olona samy manana ny toerany sy ny maha izy azy eto amin’ny firenena ireo miady ireo.
Ny mahagaga koa dia ny tsy fisian’ny saina frantsay sy Malagasy intsony mihofahofa eo amin’ity toerana ity ankehitriny izay nisy teo hatramin’izay. Nankaiza ary natao aiza ireo saina roa ireo? Efa hatramin’ny fanjanahantany no nisy ny toerana ity ary nanana ny lazany izany. Hatramin’izao dia mbola misy ny mpikambana ao.
Fantatra koa ankehitriny fa tena toerana efa any Frantsay tanteraka io toerana io, ary iarahan’ny Frantsay sy Malagasy mitantana. Misy nefa no manao kolikoly ireo mpikambana ao ka milaza fa manana ny taratasy mahakasika ny fananany izany. Dia raikitra ny ady amin’ny samy mpikambana ao amin’ity toerana ity ankehitriny.
Inona no ataon’ny fanjakana Malagasy sy Frantsay izay voakasika mivantana amin’ity raharaha ity?
Aoka hazava tsara fa vako-pirenena, ipetrahan’ny tantara ho an’ny Madagasikara sy Frantsay io toerana ity. Samy mety mandika izany amin’ny fomba fijeriny sy ny fahatakarany ny olom-pirenena tsirairay. Izany no tantaram-pirenena Malagasy ka tsy tokony ho ravana toa izao na hatakalo vola fa ilain’ny taranaka ny fahafantarana izany. Loza be eo amin’ny firenena roa tonta raha toa ka lafo amin’ny Sinoa sy mpanambola ity toerana ity.